၂၀၁၀ ဖီဖာ ကမ္ဘာ့ဖလား - ဝီကီပီးဒီးယား
၂၀၁၀ ဖီဖာ ကမ္ဘာ့ဖလား
၂၀၁၀၊ ၁၉‌ ကြိမ်မြောက် ဖီဖာ ကမ္ဘာ့ဖလားကို တောင်အာဖရိကတွင် ကျင်းပသည်။
၂၀၁၀ ဖီဖာ ကမ္ဘာ့ဖလားသည် (၁၉)ကြိမ်မြောက် ကမ္ဘာ့ဖလားပွဲဖြစ်ပြီး ၂၀၁၀ ခုနှစ် ဇွန်လ ၁၁ ရက်နေ့မှ ဇူလိုင်လ ၁၁ ရက်နေ့အထိ တောင်အာဖရိကနိုင်ငံတွင် ကျင်းပသည်။ အာဖရိကတိုက်တွင် ပထမဆုံး အကြိမ် ကျင်းပခြင်းဖြစ်သည်။ ခြေစစ်ပွဲများကို ၂၀၀၇ ခုနှစ် ဩဂုတ်လမှ စတင်ခဲ့ပြီး ဖီဖာ အဖွဲ့ဝင် ၂၀၈ သင်းအနက် ၂၀၄ သင်း ပါဝင် ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့သည်။ နောက်ဆုံးအဆင့် ပြိုင်ပွဲများတွင် အသင်း ၃၂ သင်းမှ ဘောလုံးသမား ၇၃၆ ဦး ပါဝင် ဆင်နွှဲကြသည်။ ကမ္ဘာ့ဖလားပွဲကို ၁၉၃၀ ခုနှစ်မှစ၍ ၄ နှစ်တစ်ကြိမ် ကျင်းပခဲ့ရာ နောက်တစ်ကြိမ် ၂၀၁၄ ဖီဖာ ကမ္ဘာ့ဖလားကို ဘရာဇီးနိုင်ငံတွင် ကျင်းပသည်။
၂၀၁၀ ဖီဖာ ကမ္ဘာ့ဖလား အမှတ်တံဆိပ်
၁၁ ဇွန် – ၁၁ ဇူလိုင်
32 (အဖွဲ့ချုပ်6ခုမှ)
10 (အိမ်ရှင်မြို့9မြို့တွင်)
စပိန် (1st title)
၁၄၅ (တစ်ပွဲလျှင် ၂.၂၇ ဂိုးနှုန်း)
၃၁၇၈၈၅၆ (တစ်ပွဲလျှင် ၄၉၆၇၀ ဦးနှုန်း)
Diego Forlán (၅ ဂိုးစီ)
ကမ္ဘာ့ဖလားဘောလုံးပြိုင်ပွဲ ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကို တောင်အာဖရိကနိုင်ငံ ဂျိုဟန်နစ္စဘတ်မြို့ရှိ ဆော့ကာစီးတီး အားကစားကွင်းကြီး၌ ကျင်းပရာ တောင်အာဖရိကနိုင်ငံ သမ္မတ ဂျာကော့ဇူမာ၊ မက္ကဆီကိုနိုင်ငံသမ္မတ ဖီးလစ်ကယ်ဒါရွန်၊ ဇင်ဘာဘွေနိုင်ငံသမ္မတ ရောဘတ်မူဂါဘီ၊ အမေရိကန် ပြည်ထောင်စုနိုင်ငံ ဒုတိယသမ္မတ ဂျိုးဘိုင်ဒင်၊ ကမ္ဘာ့ဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်မှ တာဝန်ရှိသူများ၊ ပြိုင်ပွဲဝင်အသင်းများမှ ဘောလုံးသမားများ၊ အုပ်ချုပ်သူများ၊ နည်းပြများ၊ ဒိုင်လူကြီးများနှင့် ဘောလုံးဝါသနာရှင် ပရိသတ်များတက်ရောက်ကြသည်။
၁ ပြိုင်ပွဲကျင်းပမည့် ဘောလုံးကွင်းများ
၃ ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ခွင့်ရသည့် အသင်းများ
၄.၁.၁ Tie-breaking criteria
၄.၁.၂ အုပ်စု A
၄.၁.၃ အုပ်စု B
၄.၁.၄ အုပ်စု C
၄.၁.၅ အုပ်စု D
၄.၁.၆ အုပ်စု E
၄.၁.၇ အုပ်စု F
၄.၁.၈ အုပ်စု G
၄.၁.၉ အုပ်စု H
၄.၃ ၁၆ သင်းအဆင့်
Soccer City Cape Town Stadium2 Moses Mabhida Stadium1 Ellis Park Stadium
26°14′5.27″S 27°58′56.47″E﻿ / ﻿26.2347972°S 27.9823528°E﻿ / -26.2347972; 27.9823528﻿ (Soccer City) 33°54′12.46″S 18°24′40.15″E﻿ / ﻿33.9034611°S 18.4111528°E﻿ / -33.9034611; 18.4111528﻿ (Cape Town Stadium) 29°49′46″S 31°01′49″E﻿ / ﻿29.82944°S 31.03028°E﻿ / -29.82944; 31.03028﻿ (Moses Mabhida Stadium) 26°11′51.07″S 28°3′38.76″E﻿ / ﻿26.1975194°S 28.0607667°E﻿ / -26.1975194; 28.0607667﻿ (Ellis Park Stadium)
Capacity: 84,490 Capacity: 64,100 Capacity: 62,760 Capacity: 55,686
၂၀၁၀ ဖီဖာ ကမ္ဘာ့ဖလား (တောင်အာဖရိကနိုင်ငံ)
Loftus Versfeld Stadium Nelson Mandela Bay Stadium
25°45′12″S 28°13′22″E﻿ / ﻿25.75333°S 28.22278°E﻿ / -25.75333; 28.22278﻿ (Loftus Versfeld Stadium) 33°56′16″S 25°35′56″E﻿ / ﻿33.93778°S 25.59889°E﻿ / -33.93778; 25.59889﻿ (Nelson Mandela Bay Stadium)
Capacity: 42,858 Capacity: 42,486
23°55′29″S 29°28′08″E﻿ / ﻿23.924689°S 29.468765°E﻿ / -23.924689; 29.468765﻿ (Peter Mokaba Stadium) 25°27′42″S 30°55′47″E﻿ / ﻿25.46172°S 30.929689°E﻿ / -25.46172; 30.929689﻿ (Mbombela Stadium) 29°07′02.25″S 26°12′31.85″E﻿ / ﻿29.1172917°S 26.2088472°E﻿ / -29.1172917; 26.2088472﻿ (Free State Stadium) 25°34′43″S 27°09′39″E﻿ / ﻿25.5786°S 27.1607°E﻿ / -25.5786; 27.1607﻿ (Royal Bafokeng Stadium)
Peter Mokaba Stadium Mbombela Stadium Free State Stadium Royal Bafokeng Stadium
Capacity: 41,733 Capacity: 40,929 Capacity: 40,911 Capacity: 38,646
ဖီဖာအဖွဲ့ချုပ်မှ ယခုအကြိမ် ဘောလုံးပွဲအတွက် အတည်ပြုပေးသည့် စုကြေးငွေ စုစုပေါင်းမှာ အမေရိကန်ဒေါ်လာ သန်း ၄၂၀ ဖြစ်သည်။ ၂၀၀၆ ဖီဖာ ကမ္ဘာ့ဖလားပွဲထက် ရာနှုန်း ၆၀ တိုးမြှင့်ထားသည်။ ဘောလုံးပွဲ မစတင်မီ ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုများအတွက် ခြေစစ်ပွဲအောင်သည့် အသင်းတိုင်း ဒေါ်လာ ၁ သန်း ရရှိသည်။ ပွဲစပြီးနောက် ပတ်လည်ပွဲမှ ထွက်သွားရသည့် အသင်းတိုင်း ဒေါ်လာ ၈ သန်း ရရှိသည်။ နောက်အဆင့် ပြိုင်ပွဲများသို့ တက်ရောက်နိုင်သည့် အသင်းများအတွက် ပြိုင်ပွဲ အဆင့်လိုက် ဆုကြေးငွေများမှာ အောက်ပါ အတိုင်းဖြစ်သည်။ 
ရှုံးထွက်ပွဲ - ဒေါ်လာ ၉ သန်း
ကွာတားဖိုင်နယ် - ဒေါ်လာ ၁၈ သန်း
အကြိုဗိုလ်လုပွဲ - ဒေါ်လာ ၂၀ သန်း
ဒုတိယ - ဒေါ်လာ ၂၄ သန်း
ချန်ပီယံ - ဒေါ်လာ သန်း ၃၀
အောက်ပါ အသင်းပေါင်း ၃၂ သင်းသည် ယခုအကြိမ် ကမ္ဘာ့ဖလားပွဲတွင် ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ကြမည်ဖြစ်သည်။
Countries qualified for World Cup finals
Country failed to qualify for finals
Country does not haveaFIFA member association
အခြားကြည့်ရန်။ 2010 FIFA World Cup schedule
All times are South African Standard Time (UTC+2)
အောက်ပါဇယားများတွင် သုံးသည့် အညွှန်းများ -
Pld = ကစားပြီးသော ပွဲအရေအတွက်
W = အနိုင်ပွဲ အရေအတွက်
D = သရေပွဲ အရေအတွက်
L = ရှုံးပွဲ အရေအတွက်
GF = အနိုင်ရသည့် ဂိုးအရေအတွက်
GA = ရှုံးသွားသည့် ဂိုးအရေအတွက်
GD = ဂိုးအရေအတွက် ကွာဟချက် (GF−GA)
Pts = ရမှတ် စုစုပေါင်း ( နိုင်ပွဲအတွက် ၃ မှတ်၊ သရေပွဲအတွက် ၁ မှတ်၊ ရှုံးပွဲအတွက် ၀ မှတ်)
ပတ်လည်ပွဲတွင် အုပ်စု ပထမနှင့် ဒုတိယ ရသည့်အသင်းများသည် ရှုံးထွက်ပွဲသို့ တက်ရောက်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။
ကမ္ဘာ့ဖလား ပွဲစဉ်များအတွက် ဖီဖာက အုပ်စုအဆင့် အသင်းများ၏ အဆင့်ကို သတ်မှတ်ရန် အောက်ပါ စံများကို အသုံးပြုသည်။
greatest number of points in all group matches;
greatest number of points in matches between tied teams;
goal difference in matches between tied teams;
greatest number of goals scored in matches between tied teams;
ရှုံးထွက်ပွဲ အဆင့်သို့ တက်ရောက်နိုင်သည့် အသင်းများ
အကျယ်တဝင့် ဖော်ပြထားသောဆောင်းပါး - 2010 FIFA World Cup Group A
ဥရုဂွေး32 1040+4 7
မက္ကဆီကို31 1 132 +1 4
တောင်အာဖရိက31 1 135 −2 4
ပြင်သစ်30 1214−3 1
မက္ကဆီကို Soccer City, Johannesburg
ပြင်သစ် Cape Town Stadium, Cape Town
ဥရုဂွေး Loftus Versfeld Stadium, Pretoria
မက္ကဆီကို Peter Mokaba Stadium, Polokwane
ဥရုဂွေး Royal Bafokeng Stadium, Rustenburg
တောင်အာဖရိက Free State Stadium, Bloemfontein
အကျယ်တဝင့် ဖော်ပြထားသောဆောင်းပါး - 2010 FIFA World Cup Group B
အာဂျင်တီးနား330071 +6 9
တောင်ကိုရီးယား31 1 156 −1 4
ဂရိ310225 −3 3
နိုင်ဂျီးရီးယား30 1235−2 1
ဂရိ Nelson Mandela Bay Stadium, Port Elizabeth
နိုင်ဂျီးရီးယား Ellis Park Stadium, Johannesburg
တောင်ကိုရီးယား Soccer City, Johannesburg
နိုင်ဂျီးရီးယား Free State Stadium, Bloemfontein
တောင်ကိုရီးယား Moses Mabhida Stadium, Durban
အာဂျင်တီးနား Peter Mokaba Stadium, Polokwane
အကျယ်တဝင့် ဖော်ပြထားသောဆောင်းပါး - 2010 FIFA World Cup Group C
အမေရိကန်312043 +1 5
အင်္ဂလန်312021 +1 5
ဆလိုဗေးနီးယား31 1 13304
အယ်လ်ဂျီးရီးယား30 1202−2 1
အမေရိကန် Royal Bafokeng Stadium, Rustenburg
ဆလိုဗေးနီးယား Peter Mokaba Stadium, Polokwane
အမေရိကန် Ellis Park Stadium, Johannesburg
အယ်လ်ဂျီးရီးယား Cape Town Stadium, Cape Town
အင်္ဂလန် Nelson Mandela Bay Stadium, Port Elizabeth
အယ်လ်ဂျီးရီးယား Loftus Versfeld Stadium, Pretoria
အကျယ်တဝင့် ဖော်ပြထားသောဆောင်းပါး - 2010 FIFA World Cup Group D
ဂျာမနီ320151 +4 6
ဂါနာ31 1 12204
ဩစတြေးလျ31 1 136 −3 4
ဆားဘီးယား310223 −1 3
ဂါနာ Loftus Versfeld Stadium, Pretoria
ဩစတြေးလျ Moses Mabhida Stadium, Durban
ဆားဘီးယား Nelson Mandela Bay Stadium, Port Elizabeth
ဩစတြေးလျ Royal Bafokeng Stadium, Rustenburg
ဂျာမနီ Soccer City, Johannesburg
ဆားဘီးယား Mbombela Stadium, Nelspruit
အကျယ်တဝင့် ဖော်ပြထားသောဆောင်းပါး - 2010 FIFA World Cup Group E
နယ်သာလန်330051 +4 9
ဂျပန်320142 +2 6
ဒိန်းမတ်310236 −3 3
ကင်မရွန်း300325 −3 0
ဒိန်းမတ် Soccer City, Johannesburg
ကင်မရွန်း Free State Stadium, Bloemfontein
ဂျပန် Moses Mabhida Stadium, Durban
ဒိန်းမတ် Loftus Versfeld Stadium, Pretoria
ဂျပန် Royal Bafokeng Stadium, Rustenburg
နယ်သာလန် Cape Town Stadium, Cape Town
အကျယ်တဝင့် ဖော်ပြထားသောဆောင်းပါး - 2010 FIFA World Cup Group F
ပါရာဂွေး312031 +2 5
ဆလိုဗက်ကီးယား31 1 145 −1 4
နယူးဇီလန်30302203
အီတလီ302145 −1 2
ပါရာဂွေး Cape Town Stadium, Cape Town
ဆလိုဗက်ကီးယား Royal Bafokeng Stadium, Rustenburg
ပါရာဂွေး Free State Stadium, Bloemfontein
နယူးဇီလန် Mbombela Stadium, Nelspruit
အီတလီ Ellis Park Stadium, Johannesburg
နယူးဇီလန် Peter Mokaba Stadium, Polokwane
အကျယ်တဝင့် ဖော်ပြထားသောဆောင်းပါး - 2010 FIFA World Cup Group G
ဘရာဇီး32 1052+3 7
ပေါ်တူဂီ312070 +7 5
အိုင်ဗရီကို့စ်31 1 143 +1 4
မြောက်ကိုရီးယား3003 1 12 −11 0
ပေါ်တူဂီ Nelson Mandela Bay Stadium, Port Elizabeth
မြောက်ကိုရီးယား Ellis Park Stadium, Johannesburg
အိုင်ဗရီကို့စ် Soccer City, Johannesburg
မြောက်ကိုရီးယား Cape Town Stadium, Cape Town
ဘရာဇီး Moses Mabhida Stadium, Durban
အိုင်ဗရီကို့စ် Mbombela Stadium, Nelspruit
အကျယ်တဝင့် ဖော်ပြထားသောဆောင်းပါး - 2010 FIFA World Cup Group H
စပိန်320142 +2 6
ချီလီ320132 +1 6
ဆွစ်ဇာလန်31 1 1 1 104
ဟွန်ဒူးရပ်စ်30 1203−3 1
ချီလီ Mbombela Stadium, Nelspruit
ဆွစ်ဇာလန် Moses Mabhida Stadium, Durban
ဆွစ်ဇာလန် Nelson Mandela Bay Stadium, Port Elizabeth
ဟွန်ဒူးရပ်စ် Ellis Park Stadium, Johannesburg
စပိန် Loftus Versfeld Stadium, Pretoria
ဟွန်ဒူးရပ်စ် Free State Stadium, Bloemfontein
ဗိုလ်လုပွဲအပါအဝင် ရှုံးထွက်ပွဲများတွင် ၉၀ မိနစ်ကြာ ပုံမှန်ပွဲစဉ် ပြီးဆုံးသွားသော်လည်း သရေကျနေလျှင် ၁၅ မိနစ်ကြာသည့် အချိန်ပို နှစ်ပိုင်း ဆက်ကစား ရမည်ဖြစ်သည်။ ဤသို့ဖြင့် အနိုင်အရှုံး မပေါ်သေးလျှင် နောက်ဆုံး၌ ပင်နယ်တီဖြင့် အဆုံးအဖြတ် ပေးမည်ဖြစ်သည်။ 
ဥရုဂွေး (pen.) 1 (4)
ဂါနာ 1 (2)
ဂါနာ (a.e.t.) 2
စပိန် 1 Third place
ပါရာဂွေး (pen.)0(5)
ဂျပန်0(3)
All times are South African Standard Time (UTC+02)
ပွဲကြည့်ပရိသတ်: 30,597 ဦး
ဒိုင်လူကြီး: Wolfgang Stark (Germany)
8', 80' Report Lee Chung-Yong
ပွဲကြည့်ပရိသတ်: 34,976 ဦး
ဒိုင်လူကြီး: Viktor Kassai (Hungary)
62' (pen.) Report K.P. Boateng
ပွဲကြည့်ပရိသတ်: 40,510 ဦး
ဒိုင်လူကြီး: Jorge Larrionda (Uruguay)
67', 70' Report Upson
ပွဲကြည့်ပရိသတ်: 84,377 ဦး
ဒိုင်လူကြီး: Roberto Rosetti (Italy)
33' Report J.Hernández
ပွဲကြည့်ပရိသတ်: 61,962 ဦး
ဒိုင်လူကြီး: Alberto Undiano (Spain)
84' Report Vittek
ပွဲကြည့်ပရိသတ်: 54,096 ဦး
ဒိုင်လူကြီး: Howard Webb (England)
ပွဲကြည့်ပရိသတ်: 36,742 ဦး
ဒိုင်လူကြီး: Frank De Bleeckere (Belgium)
ပွဲကြည့်ပရိသတ်: 62,955 ဦး
ဒိုင်လူကြီး: Héctor Baldassi (Argentina)
ပွဲကြည့်ပရိသတ်: 40,186 ဦး
ဒိုင်လူကြီး: Yuichi Nishimura (Japan)
53', 68' Report Robinho
ပွဲကြည့်ပရိသတ်: 84,017 ဦး
ဒိုင်လူကြီး: Olegário Benquerença (Portugal)
55' Report Muntari
ပွဲကြည့်ပရိသတ်: 64,100 ဦး
ဒိုင်လူကြီး: Ravshan Irmatov (Uzbekistan)
ပွဲကြည့်ပရိသတ်: 55,686 ဦး
ဒိုင်လူကြီး: Carlos Batres (Guatemala)
ပွဲကြည့်ပရိသတ်: 62,479 ဦး
90+2' Report Van Bronckhorst
ပွဲကြည့်ပရိသတ်: 60,960 ဦး
ဒိုင်လူကြီး: Benito Archundia (Mexico)
ပွဲကြည့်ပရိသတ်: 84,490 ဦး
Diego Forlán (ဥရုကွေး)
Thomas Müller (ဂျာမနီ)
Iker Casillas (စပိန်)
အကောင်းဆုံး လူငယ် ကစားသမား -
Eleven မဂ္ဂဇင်း ကမ္ဘာ့ဖလားပွဲ အထူးကဏ္ဍ Archived 11 June 2010 at the Wayback Machine.
ဧရာဝတီ မဂ္ဂဇင်း ၂၀၁၀ ကမ္ဘာ့ဖလား စာမျက်နှာ Archived 10 June 2010 at the Wayback Machine.
↑ Golden Boot။ FIFA။ 07 July 2010 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Soccer City Stadium – Johannesburg။ FIFA.com။ FIFA။ 29 August 2019 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 15 July 2010 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၃.၀ ၃.၁ "Record prize money on offer at World Cup finals only increases pain for Irish"၊ Times Online၊4December 2009။9December 2009 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Archived from the original on9December 2009။
↑ Fifa World Cup South Africa 2010 Regulations – Article 39.5 (PDF)။ FIFA (July 2007)။
↑ Regulations 2010 FIFA World Cup South Africa™ FIFA, 2010
↑ ၆.၀ ၆.၁ "Referee designations: matches 63 - 64"၊ FIFA.com၊ Fédération Internationale de Football Association၊ 8 July 2010။ 8 July 2010 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Archived from the original on 11 July 2010။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=၂၀၁၀_ဖီဖာ_ကမ္ဘာ့ဖလား&oldid=674283" မှ ရယူရန်
၂၆ ဩဂုတ် ၂၀၂၁၊ ၀၅:၀၈ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။
ဤစာမျက်နှာကို ၂၆ ဩဂုတ် ၂၀၂၁၊ ၀၅:၀၈ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။